The LeTV LEECO 1 Pro X800 USA Version Original ROM 5.5.011S Download, fixes Malware, bootloop, -Efu Software Update & Youtube | Gosi Top
The mbụ ROM ka e wepụtara site LeMe. M na-agbalị flash ekwentị m na ya ma ọ na-emepụta ihe njehie. N'ihi ya, m gbanwetụrụ edemede na ROM na mgbe gbalịrị Flash na ekwentị na ugbu a ọ na-arụ ọrụ ezi.
My ekwentị rutere na a gbajiri-abụghị elu-datable YouTube ngwa, gbajiri ngwaahịa nchọgharị, trojans na malware. Nakwa na software update ngwa-efu nakwa dị ka njikọ na software update ngwa na ntọala.
na mbụ, M nwee ike idozi ọtụtụ n'ime nsogbu site dịrị ekwentị ma e wezụga n'ihi na-software update ngwa azụ. Biko chọpụta m gara aga post maka nkọwa. Nke a ROM fixes nsogbu nile na-akawanye Software Update ngwa azụ. Nke a ROM na-nwere a music ngwa, Yahoo ihu igwe na Google Ugbu a. Mii Browser nwekwara ọrụ a otutu mma.
Tupu na-egbu maramara ekwentị na a ROM na ekwentị m na-esite na-agba ọsọ TWRP mgbake. Mgbe-egbu maramara na nke a ROM wepụrụ TWRP, arụnyere na EUI mgbake na unrooted ekwentị. N'ozuzu ekwentị ọrụ a otutu mma karịa tupu. The mbụ ROM version bụ 5.5.011S na android Lollipop 5.0.2.
Nke a ROM bụ maka US version nke ekwentị. Ọ bụrụ na ndị Mee ọnụ ọgụgụ dị BGXNAOP5501103071S, mgbe ahụ i nwere na US version. Ị nwere ike ịlele Mee ọnụ ọgụgụ site na ịga na ntọala -> Banyere ekwentị -> ewu ọnụ ọgụgụ
Biko mara na-egbu maramara ekwentị gị i kwesịrị ịrụrụ ọrụ. O nwere ike ịbụ ezi echiche iji ndabere ekwentị gị tupu egbu maramara, eji TWRP ma ọ bụ yiri.
Detuo update.zip-ike na nkpọrọgwu ọnọdụ nke ekwentị gị nchekwa
Jide igodo olu elu ma ịgbanwee na ekwentị na ike button
Ekwentị ga-akpaghị aka melite
My ekwentị e gbanyere mkpọrọgwụ na TWRP arụnyere na akpamfia iji TWRP. Ya mere, ọ bụrụ na n'elu naghị arụ ọrụ ị nwere ike na wụnye TWRP mgbe ahụ Flash na update si TWRP. Lelee m gara aga post on wụnye TWRP.
← The LeTV LEECO 1 Pro USA Version X800 Malware mwepụ, TWRP Recovery, Dịrị na Fixing buut Loop Nsogbu WiFi Tethering atọ na O2 PAYG Data Network ebuli Mmachibido Free App →
17 echiche na "The LeTV LEECO 1 Pro X800 USA Version Original ROM 5.5.011S Download, fixes Malware, bootloop, -Efu Software Update & Youtube”
Gịnị asụsụ a rom ?
Ò nwere onye aka na nke a nke. Ekwentị anaghị agbanye. M akpamfia ọtụtụ roms n'oge gara aga na mgbe nwere nsogbu a. M na-eji qfil ma wụnye mbụ rom enweghị nsogbu ma mgbe ọ na-eme dowloading na qfil ekwentị doesn't reboot dị ka ya n'oge gara aga. ekwentị na ihuenyo bụ mgbe nwa now
Full Hichapụ choro ?
Hi Bish Jaishi, ị pụrụ bulite ROM na-Mega (ma ọ bụ ọzọ Cloud ọrụ)? M ike ibudata site Google mbanye ruru ka a nnọọ ala download ọsọ. Ekele maka nkwado.
Biko ahụ na njikọ n'okpuru maka OneDrive:
bụ hi fi ụda mode ọrụ ?
m nwere ike imelite site na ngwaahịa mgbake ?
ma ọ bụ twrp bụ idemfo.
unu enweghị ọzọ kpọmkwem njikọ ka ibudata a ROM dị ka ọ na-adịghị akwado ya
Nnọọ, ebe nweta ya site na mbụ na saịtị weebụ ?
anyị pụrụ ịhụ a CN version ma ọ bụghị US
ya mere biko ?
ma play store ugbua arụnyere ?
Play ụlọ ahịa na-ama arụnyere na a ROM.
ma a rom mma si nje virus ?
na ọ bụrụ na m nwere ike iwunye a rom-enweghị TWRP ?
ROM bụ nchebe si nje virus.
Kwesịrị ịrụ ezi iji wụnye na-enweghị TWRP ezie na m na-anwale ya.
ma nke a bụ ihe ukara rom si LeTv ?
Ị pụrụ ịbụ ihe kpọmkwem banyere otú nwụnye a rom ?
Gịnị bụ ihe a ROM Cuoco92 . . . .
Hi, otú ọ bụrụ na i chọrọ flash ka eui lastest version? Ị nwere a njikọ? E nweghị usoro update kwa na ekwentị m, now m usoro bụ eui 5.816 , ekele